အင်​တာ​နက်​သုံး​တိုင်း adobe product ​အား​လုံး serial number ​ထပ်​ထပ်​တောင်း​နေ​တာ​ကို ​ဘယ်​လို block ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အင်​တာ​နက်​သုံး​တိုင်း adobe product ​အား​လုံး serial number ​ထပ်​ထပ်​တောင်း​နေ​တာ​ကို ​ဘယ်​လို block ​လုပ်​ရ​မ​လဲ
​ကဲ​မေး​ထား​တဲ့​သူ​တွေ​က ​များ​နေ​တော့ ​ကျွန်​တော် ​ဖြေ​ပေး ​လိုက်​ပါ​တယ်. ​မေးလ်​နဲ့​မေး​ထား​တာ 8 ​ယောက်​နဲ့ chat box ​ထဲ​မှာ2​ယောက် ​မေး​ထား​ပါ​တယ်. ​စု​စု​ပေါင်း 10 ​ယောက်​ပါ။ ​တစ်​ခြား​သူ​တွေ​လဲ ​မ​မေး​ပေ​မယ့် ​သိ​ချင်​နေ​ကြ ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​လုပ်​နည်း​ကို ​အ​သေး​စိတ် video ​ဖိုင်​နှင့် ​ရှင်း​ပြ​ထား​တာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​အား​လုံး ​အ​သေး​စိတ် ​နား​လည် ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
​လုပ်​နည်း​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ်. C:/windows/system32/drivers/etc ​ထဲ​ကို​သွား​ပါ။
​အ​ထဲ​မှာ "hosts" ​အ​မည်​နဲ့ ​ဖိုင်​ကို​ရှာ​ပါ။
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​ဆုံး​ပေး​ထား​တဲ့ link ​တွေ​ကို ​အ​စား​ထိုး​ပြီး​ထပ်​ထည့်​ပေး​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ခု​ပြော​တာ​ကို ​ရှင်း​တဲ့​သူ​များ​အ​နေ​ဖြင့် ​ချက်​ချင်း​လုပ်​နိုင်​သ​လို ​နား​မ​လည်​သူ​များ၊ ​မ​ရှင်း​လင်း​သူ​များ၊ ​အ​မှား​တစ်​စုံ​တစ်​ရာ​ဖြစ်​မှာ ​စိုး​ရိမ်​သူ​များ​က​တော့ ​အောက်​က adobe indesign cs5.5 ​နဲ့ adobe photoshop cs6 ​နှစ်​ခု​ကို ​ဥ​ပ​မာ​ထား​ပြီး​တော့ ​အ​စ​က​နေ ​အ​ဆုံး​အ​ထိ ​အ​သံ​နဲ့​ပါ ​ရှင်း​ပြ​ထား​တဲ့ video ​ဖိုင်​ကို download ​လုပ်​ပြီး​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ရှင်း​ပြ​ထား​တာ​နဲ့ ​လုပ်​ပြ​ထား​တာ​ဟာ product ​နှစ်​ခု​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​ဖိုင်​ဆိုက်​က​တော့ 52 MB ​လောက်​တော့ ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အ​သေး​စိတ်​လုပ်​ပြ​ပြီး ​ဘာ့​ကြောင့် ​ထည့်​ရ​တယ်​ဆို​တာ​ကို​ပါ ​ရှင်း​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တွက် ​သိ​ချင်​သူ​များ​က​တော့ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
​မှတ်​ချက်။ ။ ​ညီ​နေ​မင်း ​အ​သံ​ကောင်း​သည်​ဆို​ပြီး ​အ​ဆို​တော်​လုပ်​ရန်​တော့ ​မ​တိုက်​တွန်း​ပါ​နဲ့. ​အ​ဆို​တော်​တွေ ​ကျွန်​တော့် ​အ​သံ​ကြား​ပြီး​တော့ ​စား​မ​ဝင်​အိပ်​မ​ပျော်​ဖြစ်​သွား​မှာ​စိုး​လို့​ပါ. ​ဟီး​ဟီး . ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
naytun February 26, 2012 at 12:41 PM
​အ​ကို​ရေ ​ဖိုင်​တွေ​က ​ရှိ​တေ့ာ​ဖူး ​ဟို ​ပီး​တော့ ​ဒေါင်း​မယ်​ဆို​ရင် ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​ဒေါင်း​စ​ရာ​လို​လား ​ပြီး​တော့ ​လင့်​တွေ​က ​ဘယ်​လင့်​တွေ​ကို ​ပြော​တာ​လဲ ​မ​သိ​ဘူး ​ကျ​နော်​လည်း ​နား​မ​လည်​လို့ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ​နော် ..
Triple Seven February 26, 2012 at 3:47 PM
moe kyaw March 3, 2012 at 6:28 PM
hosts file ​သွင်း​နည်း​လေး ​ကို​ပဲ ​သီး​သန့်​ရေး​ပေး​ပါ​ခင်​ဗျာ။ ​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​တင်​လျှက်​ပါ။
moe kyaw March 3, 2012 at 6:53 PM
hosts file ​သွင်း​နည်း​လေး​ပဲ ​ရေး​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ။​ကျေး​ဇူး​တင်​လျှက်
moe kyaw March 3, 2012 at 6:59 PM
hosts file ​သွင်း​နည်း ​သီး​သန့် ​ရေး​ပေး​စေ ​လို​ပါ​တယ်။
every one July 13, 2012 at 7:40 PM
​အစ်​ကို​ရေ Mac ​မှာ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​လဲ​ခင်​ဗျ Mac ​အ​တွက်​ပါ​ရေး​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ
Ar Di November 21, 2013 at 12:09 PM
please ...how to download Adobe After Effect cs6
And Magic Bullet Looks
TuneUp Utilities 2012 with keygen
file ​တွေ​ကို ​ကူး​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ ​မြန်​ဆန်​စေ​မည်...
​အင်​တာ​နက်​သုံး​တိုင်း adobe product ​အား​လုံး se...
​လော့​ချ​ဖို့ folder lock 6.6.5 and serials